SEHATRY NY FIHARIANA: Hamafisina ny fahafaha-mamokatry ny Koperativa – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 12:35
Accueil/Toekarena/SEHATRY NY FIHARIANA: Hamafisina ny fahafaha-mamokatry ny Koperativa
SEHATRY NY FIHARIANA: Hamafisina ny fahafaha-mamokatry ny Koperativa
80%-n’ny mponina eto Madagasikara dia mipetraka any amin’ny tontolo ambanivohitra ary mivelona ao anatin’ny fambolena sy fiompina avokoa. Fanoitra lehibe hahafahana mampiakatra ny toekarem-pirenena, noho izany, ny fanohanana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana, indrindra ireo manana rafitra ara-dalàna mifandraika amin’izany, toy ny Kaoperativa.
Izany indrindra no nahatonga ny teo anivon’ny fandaharanasa Fihariana sy ny minisiteran’ny Indostrie, Varotra sy ny Asan-tanana, ny minisitera’ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono ary ny Onudi, resy lahatra ny hifanome-tanana. Fiaraha-miasa izay miompana tanteraka amin’ny fanamafisana ny fahafaha-manokatry ny kaoperativa. Tsara ho fantatra fa izany dingana izany dia tafiditra tanteraka ao anatin’ny fanatanterahana ny Velirano napetraky ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina mikasika ny asa mendrika ho an’ny rehetra, ny fampiroboroboana ny indostria isam-paritra sy ny ny fandraharahana ary ny fahavitan-tena ara-tsakafo.
Omena fanampiana ara-teknika
Tontosa omaly 11 Septambra 2020 ny fanaovan-tsoniam-piarahamiasa teo amin’ireo mpiara-miombon’antoka ireo. Araka ny fanadihadiana, anisan’ny tanjona lehibe amin’izao fiarahamiasa izao ny fanohanana ireo kaoperativa hahafahan’izy ireo mamokatra betsaka kokoa ary hananany kalitao manaraka ny fenitra. Ho an’ny minisiteran’ny Indostria, Varotra, sy ny asan-tanana manokana, ny fampiroboroboana ny fandraharahana eo anivon’ny koperativa dia isan’ny laharam-pahamehana. Hisy, araka izany, ny fampisitrahana fanampiana ara-teknika manaraka ny fenitra ireo koperativa manerana ny faritra. Eo koa ny fanomezam-panamarinana ireo vokatra ary fanampiana hahazoana tsenam-barotra ho an’ireo kaoperativa. Tsara tsiahivina fa ny Fitondram-panjakana efa mitondra anjara biriky goavana amin’ny fanampiana ireo orinasa sy ny sehatry ny fihariana amin’ny ankapobeny mihitsy, amin’ny alalan’ny fandaharanasa “Fihariana”.
Omaly no natao ny fifanaovan-tsoniam-piarahamiasa.
Fampiasana ny teknlojia vaovao eo amin’ny kaoperativa
Nilaza ny solotena maharitra ao amin’ny ONUDI Madagasikara fa anisan’ny tohanan’izy ireo ny fampiasana ny teknolojia vaovao eo amin’ny sehatry ny kaoperativa. Manampy amin’ny fanofanana, manome tanana, miara-miasa amin’ny fitantanana ny kaoperativa. Resy lahatra ny ONUDI fa ny tetikasa Fihariana dia manampy betsaka amin’ny fampandrosoana lovain-jafy ho an’i Madagasikara. Ny Minisitry ny MICA, Rakotomalala Lantosoa, nilazalaza momba ny Zara Iombonana, izay amondronana ireo mpisehatra rehetra amin’ny fampiroboroana ny indostria manodina ny vokatra any ambanivohitra. Antom-pisian’ny kaoperativa. Hampiakarana ny maha matihanina ny mpamokatra amin’ny lafiny rehetra mihitsy, manerana ny Faritra. Ampiana amin’ny fikarohana tsenam-barotra ho an’ny kaoperativa. Nanamafy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono fa ilaina ny fahaiza-manao amin’ny rohi-pihariana amin’ny sehatry ny famokarana, miainga avy amin’ny famokarana fototra, mankany amin’ny fanodinana sy ny fanjifana. Fanatsarana amin’ny lafiny teknolojika sy ny fitantanana ihany koa. Lalana iray ahafahana mizotra amin’ny fampanarahan-dalana ny fampiroboroboana ny kaoperativa, amin’ny tontolo ambanivohitra ary miditra amin’ny sehatra manara-drafitra.
Zafindravaka Valérie, Sekretera mpanatanteraka Fihariana nanamafy fa manohana amin’ny maha-olona, famantsiam-bola, fampitaovana mba hahafan’ny kaoperativa mamokatra. Mametraka olona roa manampy ny kaoperativa sy mijery ny lalam-barotra ho an’ny kaoperativa amin’ity Zara Iombonana ity.
NANOMBOKA NY TAONA 2014: Mitotaly 2.876.056.000 Ariary ny fanampiana nalefan’ny Fanjakana ho an’ny IGM
COP 26 ANY GLASGOW: Manamafy ny finiavana amin’ny fiarovana ny tontolo iainana i Madagasikara
SEHA-PIHARIANA VOLAMENA : Nifanakalo traikefa tamin’ny Mpitondra Ivoariana ny Fanjakana malagasy